मान्छे भन्दा चलाख कु’कुर जसको मूल्य रहेको छ ८ लाख रुपैयाँ, पूरा भिडियो हेर्नुहोस्!:: Mero Desh
मान्छे भन्दा चलाख कु’कुर जसको मूल्य रहेको छ ८ लाख रुपैयाँ, पूरा भिडियो हेर्नुहोस्!
Published on: १० श्रावण २०७८, आईतवार ०२:३९
नेपालमै भेटियो एति महँगो कु’कुर जसको मूल्य रहेको छ नेपाली ८ लाख’ यो कु’कुर रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा नगरपालिकाको एक किवि फार्ममा पालिएको छ। एसले दिनको ४ पटक खान्छ प्रत्येक दिन आधा केजि मासु दूध, एक कुकुर खाना र १२ वटा अन्डा खान्छ। मासिक ३० देखि ४० हजार सम्म खर्च हुने बताउछन
त्यसै किवि फर्माको एक असिस्टेन्ट को रुपमा काम गर्ने साजन राई । यो कु’कुर तिब्बत देखि ल्याइएको हो’ नेपाल मा यो प्रजातिको कु’कुर प्रसस्त रुपमा पाइँदैन। एस कु’कुर ले ८ सय रोपनीमा फैलिएको किवि फार्मको हेरचाह गर्ने गरेको बताउँछन राइले ।’ जब साँझ पर्छ त्यसपछी आफ्नो ड्युटी सुरु गर्ने गरेको छ कुकुर भन्दै राइले सुनाउँछन । पूरा तलको भिडियो हेर्नुहोस्
यो पनि,, काठमाडौं । शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी सहभागी थिए ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बालुवाटारमा पहिलो पटक बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा केही फरक दृश्य देखियो । दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड र नेपाल) र दुई जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री (यादव र केसी) सँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवा समान हैसियतमा बसेको देखियो । प्रधानमन्त्री बस्ने कुर्सी छोडेर देउवा चार नेता सरह सोफामा बसेको देखिन्छ ।​
बायाँतिरको सोफामा प्रचण्ड, नेपाल र केसी बसेका छन् भने दायाँतिरको सोफामा प्रधानमन्त्री देउवा र यादव आसीन छन् ।गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सबै समान रहेको सन्देश दिन प्रधानमन्त्री देउवा सोफामा बसेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी (तत्कालीन नेकपा) का आफू समान नेताहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा उत्पन्न परिस्थितिबाट देउवाले पाठ सिकेको देखिन्छ ।